Madaxweyne Farmaajo oo lala meel Dhigay kaligii talayaashii Sadaam Xuseen,Yaasir Carafaad iyo Mabuuta seeko Seeko | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Farmaajo oo lala meel Dhigay kaligii talayaashii Sadaam Xuseen,Yaasir Carafaad iyo...
Madaxweyne Farmaajo oo lala meel Dhigay kaligii talayaashii Sadaam Xuseen,Yaasir Carafaad iyo Mabuuta seeko Seeko
Waxaa qoray Michael Rubin, Baaraha Washington
Bishii Luulyo 25keedii, baarlamaanka la magacaabay ee Soomaaliya waxay u codeeyeen in xilka laga tuuro Xasan Cali Khaire, ra’iisul wasaaraha dalka. Tallaabadaas, ayaa u oggolaaneysa Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C / llaahi Maxamed, oo sidoo kale loo yaqaanno Farmaajo, inuu soo xoojiyo awood weyn, si lama filaan ah ayuu ula qabsaday Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka. Tallaabadan ayaa ka dhigan guul-darrooyin sirdoon oo waxay ifinaysaa iftiimin ku saabsan siyaasadda Waaxda Arrimaha Dibadda ee ku saabsan Soomaaliya xilliga dhicitaanka.
Tixgeli marka hore qiyaasta maalgashiga Mareykanka ee Soomaaliya: Mareykanka ayaa tobanaan bilyan oo doollar ku soo iibsaday Soomaaliya sannadihii ugu dambeeyay. Ka dib markii ay dhacday dawladii Siyaad Barre 1991, George H.W. Maamulka Bush waxa uu amar ku siiyay 28,000 oo ciidan ah dalka in ay dusha kala socdaan bixinta gargaarka bini’aadannimo ee ka dhanka ah dagaalada qabqablayaasha dagaalka iyo macaluusha. Halkii ay ka caawin lahayd Soomaaliya inay soo kabato, gargaarku wuu sii xumeeyay xaaladda. Waxay ku kaliftay ganacsatada awoodda lihi inay caawimaad u fidiyaan iyagoo kaalmo ka helay isla markaana isla waqtigaas gaajo u dhimanaya. Sannadkii 2011, bulshada caalamku waxay ku bixisay wax kabadan $ 50 bilyan si ay uga caawiso xasilinta Soomaaliya iyada oo aan wax badan laga muujinin maalgashikeeda.
Dadaalo lagu dhisayo dowlad Soomaaliyeed oo mideysan, shaqeyneysa, iyo dimuqraadi ah muddadan muddaysan ma aysan dhicin. Waxa jiray dhowr bilow oo been abuur ah oo la iskula dhexgalay sharciga islaamiga iyo faragelinta Itoobiya. Sannadkii 2012, Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay bedeshay Dowladdii Ku-meelgaarka ahayd waxayna noqotay isku daygii 15-aad ee lagu abuuro dowlad shaqeyneysa tan iyo markii uu dhacay Barre. Fikradda ah abuuritaanka dowladda federaalka waxay ahayd aqbalaada siyaasada qabiilka Soomaaliya iyo culeyska taariikhiga ah ee kaligii taliyihii Siyaad barre wuxuu ka dhigay awood dhexe mid aan macquul aheyn. Taabadalkeed, lixda dawladood ee Soomaaliya – oo ay kujirto Somaliland, oo tan iyo 1991-kii si firfircoon u madax-bannaan tahay waxay lahaan doontaa madaxbannaanida maxalliga ah oo leh urur dabacsan oo keliya dawladda dhexe.
Sababtoo ah dowladda dhexe waxay la kulantay burbur guud oo Soomaaliyana aysan lahayn awood ay ku qabato doorashooyin macno leh, la-hawlgalayaasha banaanka ah waxay gacan ka geysteen dhexdhexaadinta wada-hadallada lagu soo xulayo baarlamaanka iyadoo lagu saleynayo nidaamka qoondada qabiilka. Iyaga laftoodu waxay doortaan madaxweynaha, kaasoo magacaaba ra’iisul wasaaraha. Si loo muujiyo sida tani u dhaqan gasho, madaxweynaha haatan ee Soomaaliya Farmaajo ayaa ku guuleystay doorashadii 2017, isagoo ku guuleystay 184 cod oo ka mid ah 326 cod oo laga helay waddan ay wadarta dadka ku nool xilligii 14.6 milyan. Intaas oo dhan iyo tobankii sano ee la soo dhaafay, Mareykanku wuxuu malaayiin milyan oo doolar oo dheeraad ah ku maal galiyay dalka, marna haka walwelin in hay’adda Transparency International ay Soomaaliya ka gashay waddanka ugu musuqmaasuqa badan 14kii sano ee la soo dhaafay.
Danjire Donald Yamamoto, gargaarka la siinayo Soomaaliya ayaa labanlaabmay. Sanadkii la soo dhaafay, kaliya maahee USAID waxay kudeeqday ku dhawaad ​​$ 500 milyan, laakiin Yamamoto wuxuu si guul leh ugu dooday in la cafiyo deynta taasoo ku qasabtay canshuur bixiyeyaasha Mareykanka inay qortaan $ 1 bilyan oo deynta Soomaaliya ah, taas oo inbadan ay kicisay qaar ka mid ah isla xisaabtankii uu Mareykanku hadda la wadaagayo. . Yamamoto wuxuu rabay inuu siiyo Soomaaliya xitaa waxbadan.
Ku soo noqo Khaire: Wuxuu ahaa nin dabeecad ahaan aad u liita isla markaana aan u qalmin abaal marinnada uu ka helay Nicolas Berlanga, danjiraha midowga yurub ee Soomaaliya. Horraantii bishaan, ayaa Soomaalidu waxa ay sheegeen in Khayre uu u safray Qadar, oo ay maalgeliyaan siyaasiyiinta ugu sareysa Soomaalida, Khaire waxaa ku jira. Toddobaad kadib, waxaa la soo sheegay inuu ogolaaday heshiis awood qeybsi kaas oo uu aqbali doono in si sharci daro ah loo kordhiyo muddada uu ku sugan yahay Farmaajo laakiin markaa fikradda waxaa la siin doonaa sanado dhowr ah. Markii uu Khayre ku soo noqday Soomaaliya, dib ayuu ugala noqday heshiiska oo, dhacdooyinka usbuucan, wuxuu umuuqday inuu kujiro dib udhaca baarlamaanka oo inta badan codadka ka iibiya dalabka ugu sarreeya. Xitaa haddii baarlamaanku daacad ka yahay cadeyntooda ah inuu ka xanaaqay sababta oo ah horumar aan ku filneyn oo laga sameeyay qorshaynta doorashada, su’aal balaaran ayaa wali ah maxaa Mareykanku usii fogaan waayey.
Tixgeli qaabka: Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa indhaha laga laabay markii Maxamed Cusmaan Jawaari si sharci darro ah xilka looga xayuubiyay inuu noqdo af hayeenka baarlamaanka si Farmaajo uu meesha u geliyo ninkiisa. Safaaradda ayaa dhinac kale u eegtay markii ay labada madaxweyne Farmaajo iyo Khaire si sharci darro ah u beddeleen madaxweynayaasha dowlad gobolleedyada ama ay u maareeyeen doorashooyinkii Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo ay isku dayeen inay sidaas oo kale sameeyaan madaxda Jubaland iyo Puntland. Safaaradda ayaa seexatay markii Farmaajo uu abaabulay qabashada nin ka soo goostay Al-shabaab Mukhtar Robow iyo dilkii dhowr ka mid ah taageerayaashiisa kadib markii Robow uu go’aansaday inuu si dimuqraadi ah ugu tartamo doorashada – iyo markii uu Farmaajo ku dhawaaqay in shaqsi aan loo dhiibin ergeyga U.N. Nicholas Haysom, oo dhaleeceeyay tallaabada. Yamamoto wuu ka aamusay, haddii aan aamusnaan lagu taageerin, dadaallada Farmaajo ee ah in la burburiyo dhammaan xiriirkii hore ee ka dhaxeeyay Muqdisho iyo xukuumadda Somaliland iyo taageerada uu u fidiyay kooxaha kacdoon wadayaasha ah si ay u wiiqaan deganaanshaha Somaliland.
Marka la soo koobo, dayaca iyo jihada labadaba, Yamamoto wuxuu sameeyay wax walba oo suuragal ah si uu u xoojiyo Farmaajo. Kaliya sanadkii la soo dhaafay, wuxuu $ 1.5 bilyan oo doollar ku bixiyay caawimaad iyo deyn cafis siyaasi ah himiladiisu sii kordhayaan una muuqanayso tii Barre ee aan ahayn dimuqraadiyadda ama federaalnimada dhabta ah. In Farmaajo, ka dib markii uu ku guuleysto oggolaanshaha Yamamoto ee dib-u-dhigga doorashooyinka, uu u dhaqaaqi doono jilibka si uu xafiiltanku ula ordo tooska buugga ciyaarta keligii-taliyihii.
Laga yaabee in Yamamoto uu rumeysanayey in iskaashiga lala yeesho shaqsi ay ka muhiimsan tahay daryeelka xagga nidaamka. Markasta oo Waaxda Arimaha Dibadda ay raacdo istiraatiijiyaddan, ha noqoto Saddam Hussein, Yasser Arafat, ama Mobutu Sese Seko, natiijada waxay ahayd musiibo. Madaxweyne Farmaajo kama duwanaan doono, nabadgelyada qarankuna way u xun tahay Mareykanka. Iyada oo laga duulayo, ha noqoto kibri ama karti-darro, Yamamoto wuxuu u dallacay balaayiin doollar meel cusub oo wax yeelo aan loo dulqaadaneyn kuma eka oo keliya kala guurka dimoqraadiyadda ee Soomaaliya laakiin wuxuu sidoo kale u horseeday xasilloonida mustaqbalka ee dalka. Wuxuu lunsaday lacag canshuur bixiye qaab ay ku heli karto qofkasta oo ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay qadka shaqo la’aanta – hadii uusan xabsi aheyn. Waxaa la joogaa waqtigii ay Yamamoto guriga ku soo noqon lahayd.
Michael Rubin (@ Mrubin1971) wuxuu gacan ka geyste Washington Examiner ee baaraha sirdoonka Beltway. Waa aqoonyahan degane ka ah Machadka Ganacsiga Mareykanka isla markaana horay u ahaa sarkaal ka tirsan Pentagon
Xigasho: Baaraha Washin
Previous article-Saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya * waxay muujinayaan walaacooda iyo rajadooda adag ee ah in isbadallada siyaasadeed
Next articleProf. Dufle: Cagaarshowga waa cudur dhibaato weyn ku haya Caafimaadka Bulshada”
Magaalada Cadaado oo Afar Qof ugu Dhinteen Cudurka Karoone 19
Madaxweyne Ahmed Madoobe iyo Wasiir Oomaar oo Ku heshiiyey Garoowe